Zineb El Rhazoui၊ Mohamed Sifaoui၊ Zohra Bitan: အစ္စလာမ်ကိုဝေဖန်မှုများအဘယ်ကြောင့်ရောင်းရသည် - Jeune Afrique - teles relay
Zineb El Rhazoui၊ Mohamed Sifaoui၊ Zohra Bitan
က Les ဇာတိသတင်းပေး။ ပုံသေနည်းတွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုများကိုလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်း၏လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ (Iris) ၏ဒါရိုက်တာ Pascal Boniface သည်၎င်းကိုထုတ်ဝေသည့်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ New Obs.
ကနေငှားရမ်း ကိုလိုနီခေတ်လွန်လေ့လာမှုများထို့နောက်သုတေသီသည် Imam Chalgoumi ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် ဇာတိသတင်းပေး ("ဌာနေထောက်လှမ်းရေးအေးဂျင့်")၊ အသိုင်းအဝိုင်းမှဤပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သော်လည်းယုံကြည်အားကိုးလောက်သောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ရန်အခြေခံအားဖြင့်အားနည်းလွန်းသောဤပုဂ္ဂိုလ်များ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြည်သူ့ပါတီ PIR ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Houria Bouteldja သည်တော်ပီဒိုအား Leïla Slimani၊ ဖရိုကို - မော်ရိုကိုစာနယ်ဇင်းဆရာ၊ အတူတူပုံသေနည်းအတူ။
မေးခွန်းအတွက်, သူ့အလုပ် လိင်နှင့်မုသာစကား, မော်ရိုကိုရှိလိင်ဘဝ. စာရေးသူကသူမရဲ့ဇာတိတိုင်းပြည်ရဲ့ schizophrenia ကိုထောက်ပြပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အရေခြုံမှုကြားခွဲခြားထားတယ်။ ထို့နောက်သူသည်အာရပ်ကမ္ဘာ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရအများအားဖြင့်လူဖြူအများစုအားအားဖြည့်ပေးသည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရပြီး၊
ထိုအချိန်ကတည်းကထိုအသုံးအနှုန်းကိုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော Zohra Bitan၊ Jean Messiha၊ Zineb El Rhazoui, Mohamed Sifaoui သို့မဟုတ် Nader Allouche တို့မှပုံမှန်အသုံးပြုသည်။
သူတို့ရဲ့စိတ်ကူး အစ္စလာမ်နှင့်၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လည်ပတ်နေသောမေးခွန်းများ - ရွက်လွှင့်ခြင်း၊
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.jeuneafrique.com/1042456/societe/zineb-el-rhazoui-mohamed-sifaoui-zohra-bitan-pourquoi-la-critique-de-lislam-fait-vendre/ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ utm_source = ငယ်ရွယ်သောအာဖရိက & utm_medium = flux-rss & utm_campaign = flux-rss-young-africa-15-05-2018
Moody's ကမာလီကိုအီရတ်အဆင့်သို့အဆင့်လျှော့ချပေးခဲ့သည် - Jeune Afrique
Arabesques ပွဲတော် - Habib Dechraoui -“ ဒီပွဲကိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ပွဲဝင်စွမ်းအားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်” - Jeune Afrique